မူရင်းအဆိုရှင်ကို ဘေးနားထားပြီး အလွဲလွဲအမှားမှား လုပ်နေကြတဲ့ ဒိုင် ၃ ဦး ကြောင့် ကြည်ဖြူရှင် ပြောပြီ | CM
Home News မူရင်းအဆိုရှင်ကို ဘေးနားထားပြီး အလွဲလွဲအမှားမှား လုပ်နေကြတဲ့ ဒိုင် ၃ ဦး ကြောင့် ကြည်ဖြူရှင် ပြောပြီ
The Voice Myanmar အစီအစဉ်​​လေးက​တော့ အရည်​အချင်းစုံလင်​ကြတဲ့ ပြိုင်​ပွဲဝင်​​တွေနဲ့ ပရိသတ်​အား​ပေးမှုရရှိထားတဲ့ ဒိုင်​​လေး​ယောက်​ရဲ့ ​​​ပျော်​ရွှင်​ရင်​ခုန်​ဖို့​ကောင်းတဲ့ အကဲဖြတ်​မှု​တွေ​ကြောင့် နာမည်​ကြီး​နေတဲ့အစီအစဉ်​​လေးပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
လက်​ရှိ ပရိသတ်​အား​ပေးမှုအများဆုံးရရှိ​နေတဲ့ The Voice Myanmar (Season 3) ရဲ့ Blind Audition ​လေးမှာ ဖြစ်​ပျက်​သွားတဲ့ အဖြစ်​အပျက်​​လေးက​တော့ အခုတ​လော လူ​ပြောများတဲ့သတင်းတစ်​ပုဒ်​ဖြစ်​​လို့​နေပါတယ်​။
အဲ့တာ​လေးက​တော့ပြိုင်​ပွဲဝင်​ တစ်​ဦးဝင်​​ရောက်​ယှဉ်​ပြိုင်​တဲ့ သီချင်း​တစ်​ပုဒ်​ရဲ့ မူရင်းအဆိုရှင်​ကို​မေ့ထားပြီး ​နောက်​မှပြန်​ဆိုထားသူ အဆို​တော်​ကိုသာ နာမည်​တပ်​လိုက်​တဲ့အတွက်​ပါပဲ။
ဒို​င်​​လေး​ယောက်​လုံး ​လှည့်ကြည့်ကြတဲ့ မူလတန်း​ကျောင်းဆရာ​လေးရဲ့ ” ညှို့သောပင်လယ် ၊ ဆွဲငင်သောလမင်း”ဆိုတဲ့ သီချင်း​လေးဟာ ပရိသတ်​ရင်​ထဲ​ရောက်​ရှိပြီးသား သီချင်း​လေးပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
ဒီသီချင်း​လေးကို အခုအချိန်​မှာ အဆို​တော်​​အောင်​ထက်​ သီဆိုထားတဲ့ version နဲ့ လူသိများကြပါတယ်​။အမှန်​​တော့ ဒီသီချင်း​လေးရဲ့ မူရင်းအဆိုရှင်​တစ်​ဦးဟာ The Voice Myanmar ရဲ့ ဒိုင်​တစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ Rဇာနည်​ဖြစ်​ပါတယ်​။
ါကိုဂရုမပြုမိဘဲ တခြားဒိုင်​သုံး​ယောက်​က အဆို​တော်​​အောင်​ထက်​ကိုသာ နာမည်​တပ်​ကြတဲ့အခါမှာ​တော့ ဒါရိုက်​တာ ကြည်​ဖြူသျှင်​က မူရင်းအဆိုရှင်​ကို စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​မိ​ကြောင်း သူ့ရဲ့​ဖေ့ဘွက်​အ​ကောင့်မှာ
“ညှို့သောပင်လယ် ၊ ဆွဲငင်သောလမင်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်သီချင်းသီဆိုသူ မူရင်းအဆိုရှင် က” R ဇာနည် “ပါ။
ကျွန်မတို့မိသားစုပိုင် မဟာထွန်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး…. ဝတ္တု လွန်းထားထား(ဆေးတက္ကသိုလ်) ဒါရိုက်တာ က ကျွန်မ ကြည်ဖြူသျှင် ရိုက်ကူးတဲ့ ” ညှို့သောပင်လယ် ၊ ဆွဲငင်သောလမင်း” ရုပ်ရှင် အတွက်အသစ်ရေးတဲ့သီချင်းပါ။
မင်းသား – ဒွေး ၊ မင်းသမီး – ထွန်းအိန္ဒြာဗို ပါ။ တေးရေး – စောခူဆဲ ရေးပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေးကိုလဲ “Rဇာနည်” နဲ့ ” မီးမီးခဲ” ပဲဆိုထားတာပါ။ ပြီးတော့ ” လမင်းသို့” အမည်နဲ့ ” Rဇာနည် ၊ မီးမီးခဲ ” စုံတွဲသီချင်းခွေထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်…. ထုတ်လုပ်သူက ကျွန်မ ညီမ မနုရွှေရည်ပါ။
မူရင်းအဆိုရှင် ” Rဇာနည် ” ကိုအနားထားပြီးခုလိုတွေပြောနေကြတာမြင်တော့၊စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလို့ပါ။လို့​ရေးသား​ဖော်​ပြခဲ့ပါတယ်​။
ဒီအဖြစ်​အပျက်​​လေးဟာ The Voice ပရိသတ်​ သီချင်းချစ်​သူ​တွေကြား ဂယက်​ဖြစ်​သွားရုံသာမကဘဲ အင်​တာနက်​သုံးစွဲသူ​တော်​​တော်​များများကြား ​ပြောစရာသတင်းတစ်​ပုဒ်​ဖြစ်​ခဲ့တာပါ။
ဒါ​ပေမဲ့ ပြိုင်​ပွဲဝင်​ရဲခန့်က​တော့ သူနဲ့လိုက်​မယ့် version ကိုလိုက်​ပြီးဆိုခဲ့တာ​ဖြစ်​​ကြောင်း​ပြောပြခဲ့ပါတယ်​။
သူက​တော့ ဒိုင်​​လေး​ယောက်​ထဲမှာ မူရင်းအဆိုရှင်​ အာဇာနည်​ကို ​ရွေးချယ်​ခဲ့ပြီး အာဇာနည်​Team မှာ အ​ကောင်းဆုံးကြိုးစားကာ တခြားအဆင့်​တွေအထိ တက်​​အောင်​ယှဉ်​ပြိုင်​သွားပါ့မယ်​လို့ ဆိုထားပါတယ်​။
Next articleတရုတ်ရဲ့ ကြွေးမှီးထောက်ချောက်ထဲသို့ သက်ဆင်းခဲ့ရတဲ့ လာအိုနိုင်ငံ